Filtrer les éléments par date : dimanche, 11 mars 2018
dimanche, 11 mars 2018 21:54
Vehivavy 8 martsa Toamasina: Nahatsiaro ireo vehivavy voafonja tao Ambalatavoahangy
Noraisina ho toy ny fety lehibe ahatsiarovana ny vehivavy amin'ny lafiny maro ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, teto Toamasina ka nahatsiarovan'ny Komity 8 martsa toy izay fanaonizy ireo isan-taona ny vehivavy izay voahazona tany am-ponja.
Iray amin'ny asa soa nataon'ity komity ity tao anatin'ny fankalazana ny 8 martsa izany, fa mbola nisy koa ny fanampiana izay nentin'izy ireo ho an'ireo vehivavy teny amin'ny hopitaly sy ny sahirana na teto Toamasina na koa tao Brickaville, izay nisy ny hetsika rejionaly momba ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Nisongadina tokoa ny fandraisan'andraikitry ny vehivavy sy ny fampitoviana lenta azy ireo na an-tanan-dehibe na koa any ambanivohitra.
dimanche, 11 mars 2018 19:21
08 martsa: Nisafidy ny hiara-hankalaza tamin’ireo vehivavy teto Toamasina Rtoa Juliana Ratsiraka
Raha ny fanapahana noraisin’ny faritra Atsinanana nankalazana ny 08 martsa, Andro iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy, dia Brickaville no mampiantrano ny hetsika rejionaly tamin’ity taona ity.
Tsy maintsy namonjy tany avokoa ireo sampam-behivavy eo anivon’ny asam-panjakana sy ny talem-paritra samihafa ato amin’ny faritra Atsinanana.
Tsy ny fikambanam-behivavy rehetra anefa no afaka nanatrika izany noho enti-manana samy nanana ny azy, ka ho fitsinjovana azy ireo dia nanomana hetsika manokana ho azy ireo ny vadin’ny Ben’ny Tanànan’i Toamasina, Rtoa Juliana Ratsiraka, lanonana izay natao teo anoloan’ny Lapan’ny Tanàna.
dimanche, 11 mars 2018 13:11
Jirama Toamasina: Mpanjifa 2.500 efa ela niandrasana ny anjara kaonteran-jirony
Misy efa hatramin’ny taona 2012, 2013, ary 2014 izy ireo no nanao famandriahana saingy tsy mbola tafiditra mandraka ankehitriny ny jirony. Nilaza ny Tale vaovaon’ny Jirama Toamasina, Toto Jean de Dieu, fa dia hanomboka ny alatsinainy 12 martsa ny fametahana ny kaonteran’ireo efa nanao famandriahana ka nahaloa vola. Kaonteran-jiro 20 isan’andro no hapetaka ary tsy hifarana raha tsy ny faran’ny volana jona 2018.
Nilaza i Toto Jean de Dieu fa hanamafy ny fanaraha-maso ny halatra herinaratra izay miteraka fatiantoaka ho an’ny Jirama satria ny 25% hatramin’ny 30%-n’ny herinaratra vokarin’ny Jirama hatreto dia fantatra fa lany amin’ny halatra avokoa.
dimanche, 11 mars 2018 10:20
Izay tsy an'asa rehetra dia ampidirina Service National
Isaorako ny Foloalindahy nanofana ahy ka nanamafy ny fitiavan-tanidrazana tato amiko.
Mafy ireo sedra nandalovana tamin'izany.
Izaho moa no Base tao amin'ny Kaompania nisy ahy tao amin'ny Toby miaramila voalohany RM1 - Béret Vert, misahana ny tontolo ambanivohitra.
Hitatsika amin'ny sary eto ny Base sy ny contre-base tao amin'ny vehivavy, ary ny Lieutenant tamin'izany, efa Colonel izy raha ny vaovao farany azoko.
Anisan'ny nanamarika ahy ny sazy enjana nahazo anay, nefa tsy nampikemo anay izany, raha indray maraina nanao rassemblement, taona 1984, mbola nafana vay tamin'izany ny Revolisionina sosialista, ka tao aoriana tao amin'ny Kaompania notaritoko, no nisy nihoraka "Ohé Ohé" rehefa nigadona ny Barakay, toy ny olon-tokana ny Koampania rehetra tao amiko namaly hoe "Ohé".
Tsy tapitra izay, tonga dia ny Lieutenant no nandray andraikitra.
dimanche, 11 mars 2018 09:30
Korea avaratra: Hihaona i Donald Trump sy Kim Jong Un
Nampita hafatra tamin'ny alalan'ny Korea atsimo sy Chine i Kim Jong Un, filohan'ny Korea avaratra, amin'ny faniriany hihaona amin'i Donald Trumph Filoha amerikanina.
Araky ny mahazatra azy, tsy ela dia nanome ny valin-kafatra i Donald Trump ny zoma 09 marsa fa manaiky hihaona amin'i Kim Jong Un izy, saingy nametraka fepetra, dia ny anafohanana ny fihazonan'ny Korea avaratra baomba atomika, ary ny fahazoana manara-maso izany tsy misy fepetra.
Raha ny tombana dia hisy fihaonana amin'ny Korea avaratra sy Korea atsimo ny volana aprily, ka tombanana ho amin'ny volana mai izao ny an'i Trump sy Kim.
dimanche, 11 mars 2018 09:10
Fianarantsoa: Manomana ny fandalovany ny mpomba an'i Andry Rajoelina
Vory lanona teo amin'ny Espace Royal etsy Bateravola ireo mpanaradia ny mpitarika ny vina IEM na Initiative pour l'Emergence de Madagascar.
Nandrasan'ny mpomba azy hatramin'ny ora farany ka nanazavana ny zava-misy izany mpitarika ara-politika izany ny sabotsy 10 martsa, hoy ny mpanao gazety nanatri-maso.
Nambara tao anaty lanonana sy fiaraha-misakafo fa fifampiarahabana fahatrarana ny taom-baovao sy fanomanana ny fandalovan'ny filoha mitarika ny MAPAR no anton'ny havoriana io andron'ny sabotsy io.
dimanche, 11 mars 2018 09:02
Journée internationale des startups.